अनलाइन सामान ढुवानी सेवा 24X7X365 दिन
स्थानीय प्याकरहरू र मुम्बईलाई बैंगलोरमा सार्छन्
सर्वश्रेष्ठ प्याकर्स र मुभर्स मुम्बई चेन्नई
स्थानीय प्याकर्स एण्ड मूभर्स मुम्बईदेखि हैदरावाद २४x७x३६५ दिन अफिस स्थानान्तरण सेवाहरूको साथ घर सिफ्टिङका ​​लागि उपलब्ध
IBA ले स्थानीय बेस्ट प्याकर्स एण्ड मूवर्स मुम्बई देखि पुणे स्वीकृत गर्यो
भारतमा उपलब्ध विभिन्न प्रकारका सवारीसाधन यातायात सेवाहरू के के हुन्, र तिनीहरूका फाइदाहरू उल्लेख गर्नुहोस्
सामान ढुवानी सेवाहरू
भारी ढुवानी ट्रकहरू
प्याकिङ मुभिङ कम्पनीहरू घरका उत्पादनहरू एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्नु पर्ने व्यक्तिहरूको लागि उत्तम विकल्प हो। यी कम्पनीहरूले पनि...
कसरी प्रोफेशनल प्याकरहरू र मूभरहरूले अफिसमा स्थानान्तरण गर्न मद्दत गर्छन्?
प्याकिङ मुभिङ सेवाहरूमा मानिसहरूलाई मद्दत गर्ने कम्पनीहरूले चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता र मुम्बई जस्ता विभिन्न राज्य र शहरहरूमा कम्पनीहरू छन्। अन्य...
हामी सबैलाई किफायती घर प्याकर र मूभर सेवाहरूको महत्त्व थाहा छ। यो धेरै मानक हो कि अधिकांश बाहिरी-शहर कामदारहरूले आफ्नो सामान सार्न आवश्यक छ ...
यस २१औँ शताब्दीमा हामीमध्ये धेरैजना विभिन्न निजी क्षेत्रमा कार्यरत छन् । त्यस्ता कामहरू निकटताका लागि एक शहरबाट अर्को शहरमा सर्नु आवश्यक छ ...
देश भर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान र मालसामानहरू सार्नको लागि सवारी साधन सेवाहरू महत्त्वपूर्ण छन्। भाडामा सवारी साधन सेवाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ...
सामान ढुवानी सेवाहरू293
मेरो नजिक सामान यातायात सेवाहरू216
सामान ढुवानी र रसद उद्योग72
सामान ढुवानी एजेन्सी55
व्यावसायिक सवारी साधन को प्रकार37
यातायात समाचार प्रेस विज्ञप्ति33
Instagram मा हामीलाई पालन @heavyhaulagetrucks
विश्व अर्थतन्त्रमा विशेष प्रभाव पार्ने व्यापार तथा उद्योगहरू के के हुन् ?
विशेषगरी आपसी परिवेश, पत्रपत्रिका, नियमित बजारमा देखिने व्यापार निम्नानुसार छ :-
तेल प्रशोधन कम्पनीहरु
कपास कपडा उद्योग
चिनी प्लान्ट उद्योग
खाद्य प्रशोधन उद्योग
इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रॉनिक उद्योगहरू
पेब पूर्व इन्जिनियर भवन उद्योग
अटो कम्पोनेन्ट कम्पनीहरू
जैव प्रौद्योगिकी कम्पनीहरू
एयरलाइन्स र उड्डयन उद्योग
कुरियर र पार्सल उद्योग
भण्डारण ट्याङ्की उद्योग
पृथ्वी सार्ने उद्योगहरू
बिस्कुट चकलेट कम्पनीहरु
प्याकर्स मूभर्स कम्पनीहरू
खानी उद्योग उद्योग
संसारमा औसतमा कति प्रकारका व्यावसायिक सवारी साधनहरू उपलब्ध छन्?
विश्वमा देखिएका अधिकांश व्यवसायिक सवारी साधनहरु निम्नानुसार रहेका छन्
ICV ट्रक मध्यवर्ती व्यावसायिक वाहन
LPT ट्रक (लामो प्लेटफर्म ट्रक)
HMV ट्रक (भारी मोटर वाहन)
प्लेटफर्म ट्रक खोल्नुहोस्
खतरनाक फोहोर ट्रक
सेल्फ लोडिङ ट्रकहरू
कार क्यारियर ट्रक
भारी ढुवानी राक्षस ट्रक
भारत भनेको के हो ?
भारत देवभूमि र गौरवशाली राजा भारतको भूमि हो। साधारण, सहज, उन्नत र सफल भएकाले विगत एक हजार वर्षदेखि कैयौं विदेशी आक्रमणकारीले आएर छल गरेर बिगारेका छन् र संस्कृतिलाई हनन गरेर हाम्रो आदर्श सभ्यतालाई कमजोर भन्दै आफ्नो नीच व्यक्तित्व हामीमाथि थोपाएका छन् । नतिजाको रूपमा, हामी न हिन्दी जान्छौं, न उर्दू बुझ्छौं, हामी अंग्रेजी बोल्न सक्दैनौं।
भारतको हुलाक कोड के हो?
भारतीय पोष्ट द्वारा विकसित पोष्ट कोड आफ्नो स्थान पिन कोड र हुलाक कोड जाँच गर्नुहोस्:-https://www.indiapost.gov.in/VAS/Pages/findpincode.aspx
भारतमा कतिवटा नदी छन् ?
183 + भारतमा नदीहरू सन्दर्भ:- www.pincodeindia.net/list-of-rivers-in-india.php
भारतमा कति जिल्लाहरू छन्?
७१८ जिल्ला भारत
भारतको सबैभन्दा ठूलो राज्य कुन हो ?
राजस्थान (३४२,२३९ वर्ग किमी) क्षेत्रफलको हिसाबले भारतको सबैभन्दा ठूलो राज्य हो।
प्यान इन्डिया भनेको के हो ?
प्यान भारत ? मूलतः राष्ट्रभर उपस्थितिको अर्थ हो। यो एक शब्द हो जसमा फैलिएको वा भारतसँग सम्बन्धित लगभग सबै कुरा समावेश छ। उदाहरण को लागी, यो कम्पनीहरु, व्यवसायहरु, र राष्ट्र को केहि को बारे मा हुन सक्छ।
तपाईंसँग जम्मा कतिवटा ट्रक छन्?
हामी संग छ १5000 ट्रक बाट जोडिएको २ जिल्लाहरु जसमा हामी सहरी, ग्रामीण, मेट्रो र सबैभन्दा कठिन दुर्गम ठाउँबाट लोड गर्छौं वा फिर्ता गर्छौं। साथै, हामी उनीहरूलाई टायर, ब्याट्री, स्पेयर पार्ट्स र बिमा पोलिसीहरू डिलर दरमा दिन्छौं। र यस सम्पूर्ण प्रक्रियाको 40% नाफा दुर्घटनामा परेका ट्रक चालकहरूको परिवारलाई आर्थिक वा स्वास्थ्य स्रोतको लागि थोरै योगदान गर्दछ। ताकि आत्मसम्मान अघि उनको मृत्यु जीवन समाप्त नहोस्।
भारतमा कति ट्रक छन्?
भारतमा औसतमा ८० लाख कमर्सियल ट्रकले रोजगारी पाएको स्रोतबाट जानकारी आएको छ । जसमध्ये २० प्रतिशतले मात्र दैनिक काम गरिरहेका छन् ।
बाकी रहेको ट्रक को 30% तिनीहरूको संख्या लोडिङ वा अनलोडिङ कम्पनीहरूमा देखा पर्न लामो समय पर्खनुहोस्।
On 15% सडकमा, कर्मचारीतन्त्रले ठक्कर दिने ट्रकहरू राजमार्गहरूमा भ्रष्टचार गर्न उभिन्छन् ।
ट्रक को 10% ब्रेक डाउन वा चालकको कमीको कारण पार्क गरिएको छ।
र बाँकी ट्रकहरूको 25% भारतका साना सहर, जिल्ला वा दुर्गम स्थानहरूमा रिटर्न लोडको लागि पर्खिरहेका छन्।
को अवस्था ट्रक चालक राम्रो ढुवानी नहुँदा धेरै खराब छ।
निष्क्रिय यातायात के हो?
निष्क्रिय यातायात ऊर्जा इनपुट आवश्यक छैन। को एक उदाहरण निष्क्रिय यातायात प्रसार छ, उच्च एकाग्रताको क्षेत्रबाट कम एकाग्रताको क्षेत्रमा अणुहरूको आन्दोलन। क्यारियर प्रोटीन र च्यानल प्रोटीनहरू सहज प्रसारमा संलग्न छन्।
किन यातायात र रसद सबै कम्पनीहरु मा फरक लागत?
यसका धेरै गम्भीर कारणहरू छन् जसको कारणले गर्दा निम्न साइड इफेक्टहरू प्रायः संकीर्ण मानसिकताको परिणामको रूपमा देखा पर्छन्।
सरकारले ट्रकिङ उद्योगमा किलोमिटर भाडा तोकेको छैन ।
यातायात संघ कमजोर छ
जताततै औद्योगिक र मण्डीको अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन ।
पुँजीवादका कारण यो व्यवसायमा थोरै मानिसको वर्चस्व निर्माण भएको छ, जसको मनमानी एकाधिकार चलिरहेको छ ।
यी साधु, बाबा, राजनीतिक नेता र विदेशीहरूले कालो धनलाई पुँजीवाद प्रवर्द्धन गर्न र व्यापार कब्जा गर्न प्रयोग गर्छन्। र नाफाको लागि हिंसात्मक मार्गहरू पनि प्रयोग गर्छन्। यी समाचार पत्रपत्रिकामा छापिएका छन् ।
एकता नहुँदा नोकरशाही बढ्यो र चालकको जनजीवन कष्टकर बन्दै गयो । १८ देखि २० घण्टा काम गरे पनि चालक वर्गले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
सवारीसाधनको मूल्य र स्रोत दिनहुँ महँगो हुँदै गएको छ, तर विगत दशकदेखि भाडा बढेको छैन र खर्च पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ ।
ट्रान्सपोर्टरले प्रत्येक खर्चमा १८% देखि २८% कर तिर्छन् तर ट्याक्सी फिर्ताको कुनै पनि सुविधा पाउँदैनन्।
त्यहाँ जहिले पनि रिटर्न लोडको समस्या छ। टियर २ टियर ३ सहरबाट फिर्ताको भार ५ देखि १० दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य ठाउँबाट लोड उपलब्ध छैन।
असुरक्षित वातावरण, आर्थिक मन्दी, भ्रष्टाचार र मानिसको दुव्र्यवहारका कारण चालक मादक पदार्थको चपेटामा परेकाले दुर्घटना बढ्दै गएको छ ।
भाडा भुक्तान सुरक्षा र धूर्त पूर्ण कटौती
सरकार र सरकारी नीतिहरूले हाम्रो काम गर्न असफल भएको छ।
माथिका सबैले तपाईंको रसद र यातायात लागतलाई असर गर्नेछ।
नोट: - पछिल्लो दशक पहिले यातायात लागत तपाईको उत्पादनको 5% थियो। अहिले ८ देखि ३० प्रतिशतसम्म बढेको छ
यातायात v/s रसद बीच के फरक छ?
यातायात भनेको छ वस्तुहरूको प्रत्यक्ष आवागमन र रसद छ मालसामानको भित्री र बाहिरी ढुवानीको व्यवस्थापन निर्माता देखि अन्त देखि अन्त प्रयोगकर्ता ....
भारतमा यातायात व्यवसाय कसरी सुरु गर्ने?
भारतका ९९% यातायात व्यवसायीहरू भौगोलिक र आर्थिक रूपमा संकुचित छन्। यदि तपाई पनि यस्तै व्यवसाय गर्न चाहनु हुन्छ भने २० देखि ५० लाख रुपैयाँमा सुरु हुन्छ5वर्षमा घाटा संग बन्द। तर अग्रिम र आदर्श व्यवसायको लागि, तपाईं १० करोडभन्दा बढी पुँजी चाहिन्छ, दक्ष कर्मचारी, उन्नत प्रविधि, पूर्ण भौगोलिक ज्ञान भएको २ दशकको अनुभव आवश्यक छ।
भारतमा यातायातको सस्तो मोड कुन हो?
पानी, जमिन र हावा, औसतमा, यी सबै माध्यमहरू यातायातका लागि प्रत्येक देशमा उपलब्ध छन्, तर गन्तव्यलाई ध्यानमा राखेर स्थिति अनुसार निर्धारण गरिन्छ। हामी भारत र एसियाली देशका प्रान्तहरूमा 32 प्रकारका सडक यातायात सेवाहरू प्रदान गर्दछौं जुन तपाईंको लागि सस्तो र लाभदायक हुन सक्छ।
भारतमा ड्राइभिङ लाइसेन्स कसरी प्राप्त गर्ने?
सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्रको सहज पहुँचका लागि धेरै प्रयास गरे पनि एजेन्ट बिना लाइसेन्स पाउन निकै मुस्किल छ । यसको अन्तिम मूल्य पनि एजेन्टले निर्धारण गर्छ। जसमा पैसा अनुसार आवश्यक ढिलासुस्ती गरिन्छ र फलस्वरूप अपराध र दुर्घटना निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ ।हाम्रो नयाँ एनजीओ मार्फत खाँचोमा परेकाहरुलाई ६ महिनाको राम्रो तालिम सहित निशुल्क लाइसेन्स उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रयास छ । ताकि खाँचोमा परेका बेरोजगारहरूले रोजगारी पाउन र सार्वजनिक समुदायले असल र उन्नत चालकहरू प्राप्त गर्न सकून्। हामी अहिले यो सम्पूर्ण परियोजनाको लागि कोषको चरणमा छौं।
यातायात व्यवसायमा सबैभन्दा ठूलो गलत धारणा के हो?
यातायात व्यवसायमा भूगोल र दक्षतालाई बेवास्ता गर्दै सवारीसाधन मालिकले अत्यधिक ऋण दायित्व, जिम्मेवारी र खर्चमा पनि सस्तोमा काम गर्ने गरेको पाइन्छ ।
यातायात नम्बर के हो?
सबै भन्दा राम्रो प्रेषण प्रक्रिया के हो?
हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई 33 प्रश्नहरू सोध्छौं र हामी तिनीहरूको आवश्यकता, बजेट अनुपात र लोडको आधारमा2वा3प्रस्ताव गर्दछौं। वर्क अर्डर र स्वीकृत प्रस्ताव अनुसार २० प्रतिशत अग्रिम लिएर मात्र ट्रक लोडिङका लागि पठाइन्छ । लोड गरेपछि सबै कागजातहरू पूरा गर्नुहोस्। र ब्यालेन्स 20% भुक्तानी लिनुहोस्। र दैनिक आफ्नो कामको प्रगति बारे ग्राहकलाई सूचित गर्नुहोस्। गन्तव्यमा अनलोड गरेपछि, भविष्यमा सुधारको लागि दुवै पक्षबाट प्रतिक्रिया लिइन्छ।
भारतीय व्यापार प्रवर्द्धनमा वर्तमान सरकारको योगदान ?
विशेषगरी विशेष क्षेत्रमा बढी खर्च गर्न सरकारले पाइला चाल्नुपर्ने उद्योग विज्ञहरू बताउँछन् । वर्तमान सरकार शिक्षा, पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, कनेक्टिभिटी र थप कुराहरूमा केन्द्रित छ। यी सबै प्रमुख पक्षहरू हुन् जसले घट्दो आर्थिक वृद्धिसँगै वृद्धिलाई पुनर्जीवित गर्छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सयौं उद्यमी र स्टार्टअप आएसँगै अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छ । अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकारले केही पहल गरेको छ । भारतले उत्पादनका साथै अन्य सेवा क्षेत्रहरूको आवश्यकतालाई जवाफ दियो भने GDP को 80% सुधार हुन्छ।
ग्राहक खण्ड के हो? भारतीय ग्राहक आधार वर्ग कस्तो भयो?
ग्राहक विभाजन भनेको ग्राहकलाई समूहमा विभाजन गर्ने अभ्यास मात्र होइन। यसले मार्केटिङसँग सान्दर्भिक धेरै कुराहरू पूरा गर्दै आएको छ। यसरी, यसले समग्र चासो र खर्च गर्ने बानीहरू पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसैले, यो मार्केटिङ आवश्यकता संग संगठित विशिष्ट तरिका मूल्याङ्कन भनिन्छ।
लाखौं भारतीय जनसंख्यामा आधार वर्गको सबैभन्दा ठूलो दायरा छ। भारतीय बजार दायराका कारण पनि यसलाई उच्च मानिन्छ। यसमा मध्यम वर्ग, धनी र तल औसत आधार वर्ग समावेश छ। यसमा अत्यधिक धन मूल्य छ र कहिलेकाहीँ अत्यन्त गरीब अवस्थामा समावेश छ। डाटाबेस जाँच गर्दा ठूलो भारतीय आधार वर्ग पनि प्रकट हुन्छ।
भौगोलिक विविधताले भारतमा बहुराज्यीय व्यापार कम्पनीहरूलाई के गाह्रो बनाउँछ?
जातीय, सांस्कृतिक, जातीय, लिङ्ग र अन्य प्रकारका पहिचानहरूले मानिसहरूले संसारलाई कसरी चिन्ने, हेर्ने र अनुभव गर्ने भनेर निर्धारण गर्छ। विभिन्न वातावरणका व्यक्तिहरू फरक तरिकाले सोच्छन्, प्रतिक्रिया गर्छन् र सिक्छन्। भारतका बहुराज्यीय व्यापार कम्पनीहरूलाई आफ्ना कर्मचारीहरूलाई बुझ्ने प्रयास गर्दा गाह्रो छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, भौगोलिक विविधताले संगठन भित्र एकताको कमी ल्याउनेछ। यदि सहि तरिकाले दोहन गरियो भने, भौगोलिक विविधताले बहुराज्यीय व्यापार कम्पनीहरू भित्रको विवेक र बुद्धिलाई समग्र र बहुआयामिक परिप्रेक्ष्यमा प्रदान गर्न सक्छ। भारतका कम्पनीहरूलाई बहु-राज्यीय व्यापार भुक्तानयोग्य भौगोलिक विविधतासँग बढी समस्या छैन। यो किनभने प्रक्रिया थोरै सरल छ।
के त्यहाँ भारतमा अपेक्षित रूपमा एक कुशल सामान वाणिज्यिक वाहन उपलब्ध छ?
वर्तमान सरकारले विद्युतीय गतिशीलतामा दिगो र ठूलो धक्का दिएपछि भारतमा संक्रमण थप यथार्थवादी बनेको छ। सरकारको थिंक-ट्याङ्क - नीति आयोगले यातायातको शून्य उत्सर्जन मोड बढाउनको लागि संक्रमणको नेतृत्व गरिरहेको छ। मल्टि-एक्सल ट्रकहरू (MATs) लाई भारतमा उपलब्ध दक्ष व्यापारिक सवारी साधनको रूपमा मानिन्छ र औद्योगिक यातायातका लागि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यी गाडीहरू मुख्यतया 26.2 टनदेखि 49-टन सम्मका सवारी साधनहरूको ग्रस तौलका हुन्छन्। यी गाडीको बिक्री सन् २००९ र २०१० को बीचमा ५५ प्रतिशतले बढेको छ । सामान वाणिज्य सवारी साधनको उच्चतम स्तरमा व्यापक सुधार गरिएको छ समग्र व्यावसायिक सवारीको बजारको ६०% व्यापक सुधार भएको छ ।
भारतमा रसद वा यातायात लागतमा विविधता के छ?
भारतीय यातायात क्षेत्र धेरै ठूलो र विविध छ। यो सडक यातायात गुजर्न एक प्रमुख समाधान गर्दै आएको छ। सामान र उत्पादनहरू सार्नको लागि, सडक यातायात धेरै आवश्यक छ र राम्रो कार्यहरू समावेश गर्दछ। यसको धेरै परिणामहरू छन् र अधिकांश आयातहरू सडक यातायातमा निर्भर छन्। साथै, भारत मा यातायात को लागत किफायती छ र व्यापार आकार मा निर्भर गर्दछ। यसले प्रकाशनबाट काम गर्छ जसले यातायात आवश्यकताहरूको लागि औसत जनसंख्या समय बनाउँछ। त्यसोभए, यसलाई रसदमा विविधताको आधारमा प्राप्त गर्नुहोस् र यातायात लागतहरू व्यापार क्षेत्रहरूमा सीमित छ।
भारी ढुवानी ओभरसाइज ODC यातायात भारतमा एक सरल कार्य के हो?
ODC, अन्यथा अति-आयामी कार्गो भनिन्छ, अधिक आकारका सामानहरू सार्नका लागि गाडीहरूको डेक बाहिर पूर्ण रूपमा थपिन्छ। कार्गोको लम्बाइ र उचाइ दुवै मानक सवारीसाधनभन्दा ठूला हुन्छन्। यी भारी कार्गोहरू घरेलु र व्यावसायिक दुवै क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ। भारतमा ODC यातायातले मानिसहरूलाई आफ्नो भारी सामानहरू एक स्थानबाट अर्को स्थानमा छिटो सार्न मद्दत गर्न सक्छ। यो किनभने यी सवारी साधनहरू धेरै आधुनिक उपकरणहरूले सुसज्जित छन्। तिनीहरू लामो दूरीमा भारी वजनका सामानहरू ढुवानी गर्न सक्षम छन्। यातायात सेवा प्रदायकसँग यस क्षेत्रमा पर्याप्त अनुभव छ, त्यसैले टोलीले समग्र यातायात प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त बनाउँछ।
संसारमा कति राम्रो सामान वाहक कमर्शियल गाडी ट्रक निर्माताहरू प्रसिद्ध छन्?
त्यहाँ धेरै स्थानीय वा क्षेत्रीय उत्पादकहरू वा असेंबली एकाइहरू छन् जसले धेरै नामहरूमा व्यावसायिक सवारी साधनहरू बनाउँछन्। तर हामी तपाईसँग सबैभन्दा लोकप्रिय उच्च-अन्त, कुशल र उच्च गुणस्तरको भारी शुल्क ट्रक निर्माताहरूको सूची साझा गर्नेछौं।
डेमलर एजी (मर्सिडिज-बेन्ज)
भारतमा कतिवटा राज्य छन्?
भारतसँग छ 29 बताउँछ। त्यहाँ पनि छन्7केन्द्र शासित प्रदेशहरू तर सरलता र उपलब्धिको दृष्टिकोणबाट, हामी तिनीहरूलाई निम्न क्षेत्र अनुसार हेर्छौं।
दक्षिण भारत :- आन्ध्र प्रदेश ,कर्नाटक , केरल ,तामिलनाडु ,telangana , पांडिचेरी (वा पुडुचेरी),
पश्चिमी भारत :- महाराष्ट्र , गोवा ,गुजरात , दाद्रा र नगर हवेली , दमन र दीव ,राजस्थान
पूर्वी भारत (उत्तर पूर्वी भारत):- अरुणाचल प्रदेश , आसाम , मेघालय , मणिपुर , मिजोरम , सिक्किम , त्रिपुरा , नागाल्याण्ड
उत्तर भारत :- बिहार , छत्तीसगढ , हरियाणा , चंडीगढ़ , हिमाचल प्रदेश , झारखंड , मध्य प्रदेश
उडीसा , पंजाब , उत्तर प्रदेश , उत्तराखंड , पश्चिम बङ्गाल, दिल्ली , जम्मू कश्मीर , Ladakh.
आइल्याण्ड :- अंडमान र निकोबार , लक्ष्मीवेप
भारतमा कति भाषाहरू छन्?
भारतमा, हामीसँग 1600+ भन्दा बढी भाषाहरू छन् जुन मानिसहरूको मातृभाषा हो। हाम्रो देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा त्यहाँका मानिसहरूले विभिन्न भाषा बोल्छन्।
भारतमा कतिवटा पुल छन् ?
भारतमा २०० भन्दा बढी ठूला पुल तर भ्रष्टाचारका कारण त्यति राम्रो अवस्था छैन ।
भारतमा कतिवटा गाउँ छन् ?
भारतमा ६,६४,३६९ गाउँहरू छन्।
भारतमा कतिवटा राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरू छन्?
भारतसँग छ 29 बताउँछ। त्यहाँ पनि छन्7केन्द्र शासित प्रदेशहरू.
भारतको GDP के हो?
जीडीपी 2020-21 मा हालको मूल्यहरूमा 197.46 लाख करोड रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ जुन 203.51-2019 मा 20 लाख करोडको पहिलो संशोधित अनुमानको तुलनामा गिरावट देखाउँदछ। -3.0% 7.8-2019 मा 20 प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा प्रतिशत, मन्त्रालयले भन्यो।
भारतमा कति बजेको छ ?
UTC/GMT +5:30 घण्टा
कुन ट्रक राम्रो छ?
भारतमा धेरै ट्रक निर्माताहरू छन्, जसले हरेक दिन नवीनता अपनाइरहेका छन्। तर अझै पनि राजमार्गको सर्वेक्षण अनुसार
TATA ट्रकहरू: - पुन: बिक्री, मर्मत, र इन्धन बचतको लागि उत्तम
अशोक लेल्याण्ड :- हिल साइड आन्दोलनका लागि उत्तम।
Eicher:- सुपर इन्धन दक्षता, उत्कृष्ट ब्रेकिङ सिस्टम, आरामदायी र सहज ड्राइभिङ।
महिन्द्रा ट्रकहरू: - खानी क्षेत्रमा लोकप्रिय
भारत बेन्ज: - भारी ढुवानी ओभरसाइज लोड
ISUZU :- स्थानीय व्यवसायका लागि साना आम मानिसका लागि LCV खण्ड उत्तम।
सबै प्रकारका ट्रक र ट्रकिङ इतिहास:- कृपया क्लिक गर्नुहोस्
यातायातका विभिन्न साधनहरू के के हुन् ?
मेरो ज्ञानमा विभिन्न माध्यम र यातायातका मोडहरू छन् वायु, जल, र भूमि यातायात, जसमा रेल वा रेलवे, आगामी मोडहरू समावेश छन् डोरी मार्ग र ड्रोन प्रणाली
यातायात र सञ्चार भनेको के हो?
आर्थिक गतिविधिमा यातायातको अपरिहार्य भूमिका हुन्छ। स्रोत र बजारमा भौतिक पहुँच बिना, आर्थिक वृद्धि र विकास सम्भव हुनेछैन। तसर्थ, दिगो आर्थिक विकासको लागि प्रभावकारी यातायात प्रणाली एक आधारभूत तत्व हो।
यातायात रसद र यातायात को औसत लागत के हो?
सामान्य सामान ढुवानी १५ रुपैयाँ प्रति टन प्रति किलोमिटर
ओभरसाइज लोड सामान ढुवानी २५ रुपैयाँ प्रति टन प्रति किलोमिटर + सबै अनुमति लागत
नियम र सर्तहरू लागू
भारतमा डिकार्बोनाइजिङ यातायातको सुरुवात कसले गर्यो ?
इन्टरनेशनल ट्रान्सपोर्ट फोरम (ITF) र नेशनल इन्स्टिच्युट फर ट्रान्सफर्मिङ इन्डिया (NITI Aayog) ले संयुक्त रूपमा भारतमा Decarbonising Transport in Emerging Economies (DTEE) परियोजना सुरु गरेका छन्।
भारतमा घरपालुवा जनावरहरू कसरी ढुवानी गर्ने?
घरपालुवा जनावर एक घरपालुवा जनावर हो। भारतजस्तो विकासोन्मुख देशमा जहाँ सार्वजनिक र सामान ढुवानी सेवा राम्रो छैन, त्यहाँ पाल्तु जनावर ढुवानी पाउनै गाह्रो छ। हामी तपाईंलाई दक्षता दृष्टिकोणको साथ उत्तम विक्रेता फेला पार्न मद्दत गर्छौं।
भारतमा यातायात लाइसेन्स कसरी प्राप्त गर्ने?
MSME पोर्टलबाट सानो यातायात स्टार्टअप इन्टरप्राइज दर्ता र GST पोर्टलबाट नामांकन नम्बर एक हप्तामा नयाँ ट्रान्सपोर्टरलाई निःशुल्क उपलब्ध छ। यदि तपाईं सक्षम हुनुहुन्न भने, त्यसपछि ग्रहक सुविधा केन्द्र तपाईलाई रु. 500 लाग्नेछ। औसतमा २० लाखको व्यापार सम्म तपाईको काम हुनेछ । यो कागज पछि तपाईंको आय र व्यापार संग खर्च बढ्नेछ। आवश्यक भएमा स्थानीय वा क्षेत्रीय दर्ता गर्नुपर्छ।
यातायात भनेको के हो?
मानव वा वस्तुको स्थानान्तरणमा हुने प्रक्रियालाई यातायात भनिन्छ। स्थानान्तरण वा ढुवानीको उद्देश्य औसतमा धेरै किसिमले फाइदा हुन्छ। मुख्यतया यसका तीन लोकप्रिय काम गर्ने माध्यमहरू जल यातायात, हवाई यातायात, सडक यातायात हुन्। हाल, रेलवे, रोपवे, ड्रोन जस्ता नयाँ माध्यमहरू पनि काम गरिरहेका छन् र विकासको क्रममा छन्।
कति प्रकारका यातायात छन्?
मुख्यतया यसको तीन लोकप्रिय काम गर्ने माध्यमहरू छन् जल यातायात, हवाई यातायात, सडक यातायात।हाल, रेलवे, रोपवे, ड्रोन जस्ता नयाँ माध्यमहरू पनि काम गरिरहेको छ र विकास अन्तर्गत छ।हामीले ३२ प्रकारका भारी ढुवानी सडक यातायात सेवाहरू सक्षम छौं।
भारतको यातायात मन्त्री को हो?
सडक यातायात राजमार्ग तथा ढुवानी मन्त्रालय
"ट्रान्सपोर्ट भवन" 1, संसद मार्ग, नयाँ दिल्ली - 110001
टेलिफोन: +९१ ११-२३७११२५२, २३७१०१२१
वास्तवमा कम्पनी वा उद्योगको अर्थ र प्रयोग के हो?
कम्पनी वा उद्योग, वास्तवमा, एक इकाई हो जसले विशेष गरी व्यवसायलाई संलग्न गर्दछ। कम्पनी धेरै संख्यामा संरचित हुन सक्छ। कम्पनी एक निगम, एकल स्वामित्व वा साझेदारी अन्तर्गत हुन सक्छ। तपाईले व्यवहार गरिरहनुभएको बिभिन्न कम्पनीको आधारमा, यो एकल व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहको स्वामित्वमा हुन सक्छ। कम्पनी धेरै परिस्थितिहरूमा राम्रोसँग संरचित हुन सक्छ। दायित्व एक महत्त्वपूर्ण प्रकारको कम्पनी हो जुन विशेष गरी मानिन्छ। भारतमा कम्पनी वा उद्योगले देशभरि आधुनिक प्रविधि र यातायात सुविधाहरूमा सुधारको साथ ठूलो वृद्धि भएको छ।
उद्योग वा औद्योगिकीकरणमा जनहितले कस्तो प्रभाव पार्छ ?
औद्योगीकरणले समाजमा ठूलो प्रभाव पारेको छ र जनताले देशमा केही परिवर्तनको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ । उद्योगमा जनहितका आधारमा नाफा र रोजगारी बढ्छ । यो सहरीकरणमा बढ्यो र मानिसहरू खोज विकासमा शहरी केन्द्रमा सारियो। सडक यातायात, समाजको सहयोगमा निश्चित विकास स्थापित भएको छ। औद्योगिक क्रान्तिमा पनि आर्थिक विकास भएको छ । यसले औद्योगिकीकरणमा सार्वजनिक चासोको बीचमा महत्त्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनहरू ल्यायो। उद्योग पक्षहरूमा सडक यातायातमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू विचार गर्न क्रान्ति ल्याएको छ। कामदारहरूले पारिश्रमिक पाउँछन् र सामानको ठूलो उत्पादनमा फाइदा लिन्छन्।
लजिस्टिक के हो र के काम गर्छ?
लजिस्टिकलाई लक्षित गन्तव्यमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उपकरण, उत्पादन, सामग्री, र सूची सहित स्रोतहरू सार्ने प्रक्रियालाई बुझाउन व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो शब्द धेरै अनुप्रयोगहरूमा प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका रसद सेवाहरू उपलब्ध छन् तर सडक यातायातले व्यापार व्यवसायीहरू बीच बढी प्रसिद्धि पाउँछ। यो किनभने यदि व्यापार उत्पादन वा सामग्री ग्राहकहरु पुग्न सक्दैन, यो असफल हुनेछ। यो सही स्थान हो जब सडक यातायातले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले व्यवसायका अन्य धेरै पक्षहरूलाई पनि असर गर्छ। यदि उत्पादनहरू तपाईंको ग्राहकहरूलाई समयमै ढुवानी गर्दै छन् भने, यसले कम्पनीको नाफा बढाउनेछ।
भारतमा कति प्रकारका यातायात बढी प्रयोग गरिन्छ?
भारतमा तीव्र सहरीकरणसँगै देशको आर्थिक वृद्धिमा पनि सुधार आएको छ । यातायात प्रणालीलाई मुख्यतया सडक यातायात, रेलवे, अन्तरदेशीय जल यातायात, एयरपोर्ट, र एयरलाइन्स, तटीय ढुवानी र अन्य धेरै जस्ता फरक मोडहरूमा सुधार गरिएको छ। देशमा उत्पन्न हुने कुल ट्राफिकको झन्डै ८५ प्रतिशत ओसारपसार गर्ने प्रमुख माध्यम सडकमार्ग हो। भारतमा लगभग 85 मिलियन दर्ता भएका सवारी साधनहरू छन् र भारतमा कुल दर्ता भएका मोटर वाहनहरूबाट कम्पाउन्ड वार्षिक वृद्धि दर 191.7% मा सुधारिएको छ। सडकमा सवारी साधनको चाप बढेसँगै यसले व्यवसायको विकासको बाटो पनि प्रशस्त गरेको छ ।
यातायात व्यवसायका बेफाइदा के के छन् ?
यहाँ यातायात व्यवसायका कमजोरीहरू निम्नानुसार छन्:
बारम्बार दुर्घटना भारतमा सडक यातायात जोखिमपूर्ण छ। सडक दुर्घटना विरुद्ध आवश्यक सुरक्षा उपायहरू कहिल्यै बनाइएन।
अपर्याप्त सडक भारतमा धेरै सडकहरू अपर्याप्त छन् र खराब अवस्थामा पनि उपलब्ध छन्। प्रत्येक १०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा ३४ किलोमिटर लामो सडक मात्र छन्।
भारी करहरू सडक यातायात व्यवसायको अर्को कमजोरी हो। यो देशमा प्रति गाडी करको भार रु. ३५००।
खराब सडक मर्मतसम्भार भारतमा सडकहरू राम्ररी मर्मत गरिएको छैन। भारतमा सडक मर्मतमा राष्ट्रिय आम्दानीको ०.१% मात्रै लगानी हुन्छ।
बढ्दो डिजेल र पेट्रोलको मूल्य सडक यातायातको सञ्चालन मात्रा निरन्तर बढिरहेको छ ।
भारी सामानहरूको लागि उपयुक्त छैन, यो भारी सामानहरूको लागि अनुपयुक्त छ
भारतमा प्रमुख व्यापार समस्याहरू के हुन्?
अनादिकालदेखि भारतीयहरूले शान्तिको प्रचार गर्दै आएका छन्। व्यापार शिखर स्तरमा व्यापक रूपमा सुधार भएको छ तर त्यहाँ केहि समस्याहरू पनि छन् जुन अधिकांश व्यवसायीहरूले सामना गर्छन्। चाहे त्यो सरकारसँग सम्बन्धित होस्, ‘भगवान’बाट हुने अपराध होस्, सडकको अवस्था होस्, भ्रष्टाचार होस् वा अरू कुनै पनि परिस्थितिमा व्यापार प्रभावित हुन्छ । भ्रष्टाचार सबैभन्दा खराब महामारी हो जुन भारतमा व्यापक रूपमा फैलिएको छ त्यसैले यसलाई बुद्धिमानी र चाँडो सम्हाल्न महत्त्वपूर्ण छ। यद्यपि हाम्रो देशलाई हाल धेरै परिवर्तनहरू आवश्यक भए तापनि हामीले तुरुन्तै समाधानको लागि विचार गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरू तल दिइएका छन्।
- शिक्षा प्रणाली
- आधारभूत स्वच्छता
- स्वास्थ्य सेवा प्रणाली
खराब यातायात सेवाको नराम्रो व्यवसायमा के र कति असर पर्छ?
कमजोर यातायात सेवाका कारण धेरै व्यवसायहरू प्रभावित भएका छन्। कम सडक यातायातका कारण प्रभावित ठाउँमा सामान स्थानान्तरण गर्दै। यसले दिमागमा राख्नको लागि धेरै चीजहरू समावेश गर्दछ र उत्पादन तल हुनेछ। यस अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न, खराब यातायातलाई सकेसम्म छिटो पार गर्न आवश्यक छ। यसले ग्रामीण इलाकामा पर्याप्त सडक बढाएर उत्पादन बढाउँछ। कृषि सामग्री र बजारका लागि सडक यातायात अनिवार्य छ। त्यसकारण, खराब यातायातलाई उचित मापन गरेर समाधान गर्नुपर्छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा, धेरै चीजहरू सहज रूपमा सञ्चालन गर्न यातायात महत्त्वपूर्ण छ। तसर्थ यो भ्रमबाट बच्न सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्छ र सडक यातायात प्रवर्द्धनका लागि सक्दो पहल गर्नुपर्छ ।
भारत सरकारको नीति व्यापारका लागि उपयुक्त छ ?
हालै, नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारतीय सरकारले अनन्त संख्यामा उदीयमान स्टार्टअपहरूको फराकिलो संसारमा बढी ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ। यसका लागि भारत सरकारले नयाँ अवसर र कार्यक्रमहरू सृजना गरिरहेको छ । तिनीहरूले पोषण र नवीनता दुवैमा कम्पनीहरूलाई मद्दत गर्छन्। नयाँ उद्यमशीलतालाई समर्थन गर्न भारत सरकारले धेरै पहलहरू गरिरहेको छ। यसले भारतीय युवाहरूमा रचनात्मकताको सभ्यतालाई बढावा दिने लक्ष्य पनि राख्छ। असाधारण र ठूलो तथ्याङ्कीय लाभको साथ, भारतले व्यक्तिगत रूपमा व्यापार बढाउन र सुधार गर्न सक्छ र यो राष्ट्र र विश्वको फाइदाको लागि पेशा बनाउन सक्छ। देशको समृद्धि र विकासलाई सक्षम बनाउन हरेक कदम चालिन्छ।
सडक यातायात मन्त्रालय
सवारी साधन विवरण जाँच
ABCC भारत परियोजना कार्गो निगम
भारतको पहिलो भारी ढुवानी ट्रक एग्रीगेटर
परियोजना परामर्शदाता भारी ढुवानी
सामग्री ह्यान्डलिंग रसद समर्थन र भण्डारण
मुख्यालय:- 169/23 PCNTDA निग्दी पुणे महाराष्ट्र भारत 411044
ग्राहक समर्थन: - +919408275245
भारत समय क्षेत्र: - 8AM देखि 8PM सम्म
व्यापार पारदर्शिता, मैत्री सहयोग र समन्वय, चरम दक्षता, उचित मार्गदर्शन र उच्चतम निष्कर्ष ABCC INDIA Project Cargo Corporation को परिभाषा हो। भारत, नेपाल, भुटान, बंगलादेश 686 जिल्लाहरू 6,49,481 स्थिर, सरल, पहुँचयोग्य, किफायती, भरपर्दो, प्रमुख, कुशलतापूर्वक बोक्ने आर्थिक सेवाहरू, सबै देशहरूमा हाम्रो व्यावसायिक र सम्मानित स्थान। व्यवसायीको हितलाई सम्मान गर्दै हरेक क्षेत्रका सबैलाई निरन्तर, निष्पक्ष, सरल, सहज र भरपर्दो सेवा प्रदान गरी व्यवसायको पारदर्शिता र सरलता अभिवृद्धि गर्ने हरसम्भव प्रयास छ । प्रत्येक प्रदेशलाई उत्कृष्ट मापदण्ड र सिद्धान्तको जगमा जोडेर उत्कृष्ट निष्कर्षमा पुगेर राष्ट्रको व्यावसायिक दृष्टिकोण र प्रतिष्ठालाई प्रगतिको बाटोमा अघि बढायो । जसबाट हामीले विकासोन्मुख राष्ट्र होइन विकासोन्मुख राष्ट्रको नाम पाउन सक्छौँ । राम्रो नतिजाहरू उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूको क्षमताभन्दा ग्राहकहरूको योगदान र विश्वास महत्त्वपूर्ण छ, ग्राहकको विश्वास र सन्तुष्टि हाम्रो संस्थाको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो।
हामीलाई ईमेल गर्नुहोस्:
अब बटन कल गर्नुहोस्